Shiinaha Anchoring isku haysa ilkaha APA Taxanaha soo saaridda iyo Warshad | JOOJI
Sharaxaadda haynta dhamaadka dhamaadka cab cable CROP waa soosaarayaasha xirfadleyda xajinaya iyo alaab-qeybiyeyaasha. Haysa dhamaadka Dead for adeegga ab cable l ...
Sharaxaadda haynta dhamaadka dhimashada ee xarigga ab
CROP waa soosaarayaal xira xirfadlayaal iyo alaab-qeybiyeyaal.
Hawsha dhamaadka dhamaadka ee khadka adeegga ee xarigga ab. Xakamaynta dhamaadka dhimman waxaa loogu talagalay inay ku xirto khadadka adeegga dahaaran leh 2 ama 4 qaboojiyeyaasha ulaha ama derbiga. Isku haynta waxay ka kooban tahay jir, xajmiyo iyo damiin la saari karo oo la hagaajin karo ama suuf. Mid ka mid ah xirmooyinka 'Anchor clamps' ayaa ah naqshad lagu taageerayo farriinta dhexdhexaadka ah, xajmiga ayaa is-hagaajin kara. Fiilooyinka Pilot ama kirishboonka nalalka wadada ayaa lagu hogaaminayaa haynta. Furitaanka iskiis waxaa ka muuqda aaladaha isugeynta ee guga si si fudud loogu geliyo qaboojiyaha haysa. Heerka: NFC 33-042.
Qalabka isku haynta dhamaadka
Feature ee haysa dhamaadka dhimatay
Wixii saxda ah ee ku xirida dhamaadka dhimista, talaabooyinka soo socda ayaa lagula talinayaa:
Qeexitaanka dhamaadka dhamaadka xajinta
Moodooyinka APA-25- * APA-25 - * - 500 APA-50- * APA-50 - * - 500
Cabirka mitirka (mm) 3 ~ 7 3 ~ 7 6 ~ 10 6 ~ 10
(*) Ku dar "FA" oo macnaheedu yahay xarig bir ah, ku dar "SS" macnaheedu waa xarig bir bir ah
Dhex-dhexaadinta Xirmooyinka Aluminium Aluminium ee loogu talagalay ADSS / Wareeg ...